7 အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပရန်အစားအစာအကောင်းဆုံး Tours မှ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပရန်အစားအစာအကောင်းဆုံး Tours မှ
သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးယားဖို့စွန့်စားမှုအပေါ် Go နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်. သင်တစ်ဦး avid အစားကောင်းကြိုက်သူများဆိုရင်, သင့်ရဲ့အာခေါင်, အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ Instagram ကိုအစာကျွေးခြင်းသင်တွေ့ကြုံခံစားတံ့သောအရာကိုနှင့်အတူဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလိမ့်မည်အဖြစ်. ဒါပေါ့, ဥရောပ၌ gastronomic ပါရမီနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ရထားနဲ့. Here are our top of7အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပရန်အစားအစာအကောင်းဆုံး Tours မှ.
1. အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပစေရန်စားနပ်ရိက္ခာ Tours မှ: Baguettes ရန်ဘစ်စထရိုခုနှစ်တွင်ပဲရစ်ကနေ, ပြင်သစ်
အချက်အပြုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်သင်၏ခြေအိတ်ချွတ်ခေါက်နိုင်သောမြို့တမြို့သို့လည်းမရှိဆိုပါက, ဒါကြောင့်ပဲရစ်ရဲ့က, ထိုကွောငျ့, ဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာခရီးစဉ်များအတွက်စာရင်းတွင်ပထမဦးဆုံး. ရလဒ်အနေဖြင့်, ပဲရစ်ပြေးမဟုတ်ဘဲဟုခေါ်တွင်စေသင့်ကြောင်းများစွာသောအစားအသောက်ခရီးစဉ် အစားအစာပညာရေး သူတို့သမိုင်းအတွက်ယစ်မူးနေကြသောကြောင့်,. အစဉ်အလာရာစုနှစ်တဆင့်ချလွန်ပြီ.
အရာအားလုံးမုန့်နှင့်ဒိန်ခဲ၏အခြေခံမှမိမိတို့ကျော်ကြားခဲဖွယ်စားဖွယ်မှဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်, foie gras အဖြစ်အိမ်လုပ် rillettes နှင့် Armagnac. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျ Parisian လည်းဗျာဒိတ်ကျမ်းနိုင်ပါတယ် ကဖေးယဉ်ကျေးမှု.
ဘက်လမ်းများအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Wind နှင့်မည်မျှ chic စားသောက်ဆိုင်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အလွန်အံ့သြစေ, ကဖေး, စားသောက်ဆိုင်, အဲဒီမှာ boulangeries များမှာ. ရလဒ်အနေဖြင့်, သငျသညျအဟောင်း - ရှေးချက်ပြုတ်နည်းများ၏ပြီးပြည့်စုံသောရောနှောခြင်းနှင့်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်နယ်ပယ်ထဲမှာအသစ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
2. စားနပ်ရိက္ခာ Extravaganza: အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
သငျသညျအမ်စတာဒမ်နှင့်၎င်း၏အစားကောင်းကြိုက်သူများမြင်ကွင်းတစ်ခုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ဘေးထွက်တွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်, အဆိုပါ Jordaan ခရိုင်၏တန်တိုင်းပြန်လမ်းများစူးစမ်း. ရလဒ်အနေဖြင့်, သင်သည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုဝေမျှဖို့စိတ်အားထက်သန်ဒဏ်ငွေအစားအစာ purveyors ကိုရှာဖွေအဖြစ်မြို့တော်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်အင်ဒိုနီးရှားအချက်အပြုတ်အမွေအနှစ်သို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားငါပေးမည်.
ကျနော်တို့သင်အထင်ကရ 400 နှစ်အရွယ်ကဖီးမှာပန်းသီးပိုင်ကြိုးစားကြဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်, ကဖီး Papeneiland. သင်တို့သည်လည်းရာစုနှစ်တစ်ခု-ဟောင်းမိသားစုစာရွက်ကနေဖန်ဆင်းတော်သောက်သည်ဝက်အူချောင်းကြိုးစား herring စားရန်ဒတျချြလမ်းကိုသင်ယူနိုင်.
3. Craft ဘီယာ၏အနုပညာ & စားနပ်ရိက္ခာခုနှစ်တွင်ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
သငျသညျပရာ့ဂ်၌ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင်, အဆိုပါ hipsters အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပြုပါနှင့်ပျော်မွေ့ ယာဉ်ဘီယာ အဖြစ်တစ်ဦး စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက် ခရီးစဉ်. သငျသညျပင်ဘီယာကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူလှည့်လည်ယူနိုင်ပါသည်. သူတို့ကတစ်ဦး Pivo ပေါ်တွင်သင်ယူပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် (ဘီယာ) အခြားမည်သည့်မတူပဲခရီး.
သဘာဝကျကျ, ယာဉ်ဘီယာအမြဲအနည်းငယ်ရွေးချယ်မှုဒေသခံတဖဲ့စားခြင်းအားဖြင့်ပျော်မွေ့နေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, နှင့်ou အမည်ကိုမှ braised အမဲသားနှင့်အတူ Scotch ကြက်ဥသို့မဟုတ် Czech ဖက်ထုပ်ကြိုးစားကြပေမယ့်ပရာ့ဂ်၏အစားကောင်းကြိုက်သူများဘဏ္ဍာကိုအနည်းငယ်နိုင်. ဒါဟာဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအစားအစာခရီးစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်.
4. အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပစေရန်စားနပ်ရိက္ခာ Tours မှ: မက်ဒရစ်ခုနှစ်တွင်အသက်အရွယ်အဘိဓါန် Old ရိုးရာဓလေ့, စပိန်
တစ်ဦး bonafide အစားကောင်းကြိုက်သူများစွန့်စားမှုအဘို့, မက်ဒရစ်မစိတ်ပျက်စေ! မက်ဒရစ်နှင့်တွေ့ကြံဒေသခံစျေးသည်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကမှတဆင့် Meander. ကြိုးစား ဒေသခံစပျစ်ရည်ကို နှင့်ဒိန်ခဲသမိုင်းဝင် Anton မာတင် Market ကနှစ်သက်တော်မူ၏. တချို့၏ Have, ပွဲတစ်ပွဲ, ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံး cheesecakes, အရာအချို့ကိုတရာနှစ်အရွယ်မီးဖို၌ဖုတ်နေကြ.
5. တစ်ခုအတွင်းအမြင် မှစ. ကြိုင်သောအနံ့ရှိအဆိုပါစီးတီး: ဗင်းနစ်, အီတလီ
သငျသညျဗင်းနစ်အတွက်တဟုန်တည်းပြေးခံရဖို့မလိုချင်ကြပါလျှင်တစ်ဦးခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်. မြို့ ins နှင့်တနေရာသိတယ်နှင့်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်လူအစုအဝေးကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အချို့ကိုသင်တွေ့ပါစေသူတစ်ဦးနှင့်အတူစာအုပ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအခြို့သောနာမည်ကျော်စပျစ်ရည်ကိုဘားထုတ်စစ်ဆေးရှေ့တော်၌ခေါက်ဆွဲစားသောက်ဆိုင်ဖို့တူးမြောင်းကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးကြိုးတပ်စီးနင်း ယူ. prosecco တစ်ဖန်သောက်ရ, ဒေသခံမြာပွေရဲ့နဲ့အတူလူကြိုက်များ.
6. အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပစေရန်စားနပ်ရိက္ခာ Tours မှ: နိုင်ငံတကာစားနပ်ရိက္ခာရှုခင်းခုနှစ်တွင်ဘာလင်, ဂျာမနီ
ဘာလင်ရဲ့အစားအသောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်နိုင်ငံတကာအစားအသောက်ကိုရွှေပေါ်မှန်သည်, နှင့်ရလဒ်အဖြစ်, သင်တစ် ဦး အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ခရီးသွားကြသောအခါမိတ်ဆွေများကအောင်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဘယ်အရာကိုမျှအစာကိုမအတော်လေးအဖြစ်အတူတူကလူတတ်၏.
Kreuzberg ရဲ့တူရကီ Market ကထွက်စစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ပါစေ (သို့မဟုတ်သုံး) အမျိုးမျိုးသောကဖေးများနှင့် Bakeries မှာ.
7. တစ်ခုစစ်မှန်သောအစားကောင်းကြိုက်သူများ, အတွေ့အကြုံများ: ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
ဗီယင်နာအားလုံးကျက်သရေဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အရသာမှကြွလာသောအခါသို့သော်ဒီအထူးသဖြင့်ဒါဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအဖွဲ့ဝင်များကိုစစ်မှန်ရှိပြီးသင်တစ်ဦးဂန္ Viennese ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဦးအလည်အပတ်နှင့်အတူစတင်သင့်တယ်. ကော်ဖီအိမျမှ, သင်လူကြိုက်များ Naschmarket ရန်သင့်လမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒိန်ခဲနှင့်ရှာလကာရည်ကိုထည့်သွင်းကြောင်းသြစတြီးယားအထူးများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနဲ့အစဉ်အလာကျောက်မျက်ရတနာ.
သင်တစ်ဦးဝက်အူချောင်းကိုစားပြီးနောက်သင် Wurstelstand ရောက်နေအခါဂရမ်ပေါ်မှာတစ် pic ကိုယူမထားဘူးဆိုရင်, သင်ပင်ရှိခဲ့သည်? စစ်မှန်သောအဘို့အ🌭But, သူတို့မှာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဝက်အူချောင်းများရှိသည်! တစ်ဦးလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်သမိုင်းဝင်အိမ်အောက်ခန်းမှာအချို့သြစတြီးယားဝိုင်နှင့်အတူကဆင်းလျှော်အချို့ delish အချိုပွဲနှင့်အတူဿုံကအားလုံးကိုပယ်အဆုံးသတ် အကြီးအချောကလက်ဆိုင်. 🍫
အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပစေရန်စားနပ်ရိက္ခာ Tours မှ: ကောက်ချက်
သငျသညျသွားလေရာရာ၌, ကြောင်းအကောင်းဆုံးဝတ်စုံသငျသညျလိုသည့်ခရီးစဉ်၏စာရင်းများကတဆင့်နိုင်အောင် browse.
သငျသညျအတှေ့အကွုံချင်ပါတယ်အဘယျသို့ Choose နှင့်အသုံးပြုခြင်း တစ်ဦးကရထား Save သင့်ရဲ့ရထားခရီးသွားလိုအပ်ချက်များအတွက်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်ဥရောပရန်အစားအစာအကောင်းဆုံး Tours မှ ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အစားသောင်းကြမ်းသူ FoodScene FoodTour Instagram ကို TrainsInEurope ရထားခရီးသွား